UMaleny: "I-Bower" - 'indlu yababini' - I-Airbnb
UMaleny: "I-Bower" - 'indlu yababini'
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguWanita
Indlwana yesi sibini yenye yeepaviliyo ezintathu ezisondeleleneyo e-The Bower, i-rustique rainforest retreat; i-hamlet encinci kuphela imizuzu eli-10 ukusuka eMaleny kunye nemizuzu engama-20 ukuya eWoodfordia. Relaxa phambi kwendawo yomlilo eshushu, yonwabele ubomi obuninzi beentaka ukusuka kwindawo yakho yangasese, ngena kwindawo yokuhlambela ye-antique clawfoot, kwaye ulahlekelwe kumbono wesibhakabhaka. Kubandakanya: isidlo sakusasa esilula*, iWiFi yasimahla, iFoxtel, ikhitshi lompheki onqabileyo, uchuku, ilinen esemgangathweni, iinkuni** kunye nechibi lasehlathini*.
* Yonwabela isidlo sakusasa esilula selizwekazi ngentsasa yokuqala yokuhlala kwakho. Isidlo sakusasa (iti, iplunger kunye nekofu ye-espresso, ijusi, i-cereal, iziqhamo, iyogathi kunye nesonka esithotyiweyo) zikwi paviliyoni yakho ukuze uzonwabele xa uzipholele, kwaye zibandakanyiwe kwixabiso lokubhukisha. Inkonzo yokugcina ukutya iyafumaneka.
* Iqula kwabelwana ngalo phakathi kwabanini propati kunye nezinye iindwendwe.
* Nceda uqaphele, ishawari ingaphezulu kwebhafu yeenyawo zozipho lwamandulo.
• Iinkuni zokubasa nokubasa zibonelelwa kuphela ngeenyanga ezipholileyo (ukuqala kukaMeyi ukuya ekupheleni kuka-Agasti): ngokwaneleyo ukubasa umlilo omnandi ngobusuku ngabunye. Izinga lobusuku ngeli xesha liyenyuka ukubonisa oku kubandakanywa.
4.96 · Izimvo eziyi-520
Ngaphezulu kwemizuzu eyi-10 ukuqhuba:
UMary Cairncross Park
Kwimizuzu engama-20 ukuya kwengama-30 uqhuba:
Kwimizuzu engama-45 ukuya kwengama-50 uqhuba:
Zonke iilwandle zeSunshine Coast -
IBullcock Beach, Kings Beach, Moffat Beach, Currimundi Beach, Mooloolaba Beach
Umbuki zindwendwe ngu- Wanita
Sihlala kwipropati kwaye siyafumaneka ukuze sincede ngamaxesha onke.